Posted by Kaung Kin Ko at 10:05 AM
အရှိကို အရှိအတိုင်း ချရေးထားတာပဲ။ မရိုင်းပါဘူး။ သွယ်ဝိုက်ပြီးပြောလို့ မသိတဲ့သူတွေကို
တခါတလေ တည့်တည့်ပြောပေးရတယ်။ ဒီလို ဘက်မလိုက်တဲ့ အတွေးအခေါ်စာသားတွေကို အမြဲ ထုဆစ်နိုင်ပါစေ။
ကျနေ်ာ့ အမြင် ဆုတွေ မှာ သတ်မှတ်ချက် ကိုယ်စီ ၇ှိနေကြတယ် . ဥပမာ miss လိုဆုမျိုးအတွက် ပေါင်ချိန်ဘယ်လောက် အ၇ပ်ဘယ်လောက် . talent က ဘာတွေ ၇ှိ၇မယ် . စဖြင့်ပေါ့ . ဆိုတော့ အဲ့ ဒိသတ်မှတ်ချက်တွေ နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ သူကို miss ဆုပေးလိုက်မယ် .ဒါပေမယ့် ကျနော့်လို ပွဲကြည့်သူတယောက်က miss ဆု၇သူကို ကြိုက်ချင်မှ ကြိုက်မယ် . ကျနေ်ာ နှစ်သက်တာက ဘာဆုမှမ၇တဲ့ မိန်းခလေး သို့ မဟုတ် ၀င်မပြိုင် တဲ့ မိန်းခလေးတယောက်ဖြစ်နေမယ် . ဒါဆို သတ်မှတ်ချက် တွေ နဲ့ ရွေးချယ် ထားတဲ့ ဆုတွေ ဟာ ကျနေ်ာ့ အတွက် ဘာမှ ဟုတ်မနေတော့ ဘူး . (ဒါက အလှအပ ဆိုင်၇ာ physical ပိုင်းဆိုင်ရာဆုအတွက် အမြင်ပါ) . နန်းခင်ဇေယျာ vote တွေ ကြည့်ပြီး သောက်မြင် ကပ်လွန်းလို့ ဗျာ :D
ဆိုးတုန်းက ဆဲတယ်..ကောင်းတော့ နိုဗယ်ဆုပေးတယ်..ဘာဖြစ်တုန်း.. အကြောင်းမသိပဲ လျှောက်ရေးနေပုံပဲ..
Ko ဆိုတဲ့ သူလည်း ပို့စ်တွေ အများကြီးလိုက်ဖတ်။ အကုန်လုံးမှာ ကွန်မန့်အရှည်ကြီးတွေ လိုက်ရေးနဲ့ တော်တော်ပင်ပန်းလောက်ပြီ။ :D
Saingkhan Tun said...
မှန်တယ်ထင် ရေးရဲတဲ့ ကိုကောင်း သတ္တိကို လေးစားတယ်ဗျာ
မျက်စိမှိတ်ပြီး ဘက်လိုက်မဲပေးတယ်ဆိုတာ ရသင့်ရထိုက် သူရဲ့ အခွင့်အရေးကို ခိုးယူလိုက်တာ.... ဟုတ်တယ်ဗျ လူတွေက ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုဘက်လိုက်တာ ဘာညာနဲ့ ကိုယ်ကိုတိုင်ကျတော့ဘာမသိ ညာမသိ ကိုယ့်လူမျိုးဖြစ်ရင်ပြီးရော ဆိုပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါးကြီး ဘက်လိုက်ကြတဲ့အပြင် သူများတွေကိုပါ ဘက်လိုက်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်သေးတယ်။ ဒါကိုပဲ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်လို့ ပြောကြအုံးမလား မသိဘူးနော်။